Izifo zesifo senhliziyo kunye neyokuqala uncedo lwezokwelapha kufuneka ziqhelane nabo bonke abantu, kwaye kungekhona nje kuphela "kwiibhola" ngokwabo. Izifo zentliziyo kunye nenkqubo ye-cardiovascular ziyingozi kwaye zifuna ukungenelela kwonyango.
Ngokuqinisekileyo, iinzame zezinye izigulane ukuba zisebenzise uncedo lwamachiza angaqhelekanga alwamkelekanga kuphela ngenxa yokuba zanceda umntu kwizalamane okanye ngabahlobo bakhe. Siyayazi imeko xa isiguli sigqithise ukulahlekelwa ngumphefumlo wakhe, sithatha isidakamizwa esichaphazelekayo, endaweni yesichengululo esenza ukuba uqhube ukuqhutyelwa kwe-intracardiac, ukuyicutha. Kwaye isizathu sokuba yonke into ingakwazi ukugula nokuzigulisa.
Ewe, umguli kufuneka aziphathe njani entliziyweni yesifo sengxaki? Ukuba oko kwenzeka okokuqala kwaye akukho nto ichaphazela ngokubanzi imeko yezempilo, kufuneka ufune ke iingcebiso kumgqirha. Ukuba uhlaselo lulibazisekile, i-dyspnea kunye nobuthakathaka obuthathaka ngokubanzi, kufuneka ukuba unyango oluphuthumayo lufunekayo. Kuphela ugqirha, usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zoviwo, kunye ne-electrocardiography, ngokubhekiselele kwiimeko ezithile, unokufumana unyango oluchanekileyo. Kuxhomekeke kwisifo esiyintloko, apho i-arrhythmia iqhutywe ngayo, isimo sayo (i-paroxysmal okanye i-constant), inqanaba lentliziyo (i-tachy- okanye ibradyform), indawo yentsholongwane yesifo senhliziyo (i-sinus node, i-atrium okanye i-ventricles). Uyabona ukuba zininzi izinto ogqirha kufuneka aziqwalasele ngokukhetha unyango olufanelekileyo.
Ininzi yezigulane ezinomzimba we-cardiac arrhythmia ziye zafumana isigxina esisigxina okanye ziphinda ngokuphindaphindiweyo, ziphantsi kolawulo lwesigqeba kunye nokusetyenziswa kwezidakamizwa ezikhethiweyo ezikhethiweyo. Oku kuvumela ixesha elide ukugcina izinga elaneleyo lokunikezelwa kwegazi emzimbeni nokukhusela ukupheliswa kwangaphambili kwintliziyo yesisu. Icebiso legqirha kunye namava athoba ngokuthe ngcembe kunceda izigulane zethu zikwazi ukujamelana nokuhlaselwa ngokwabo. Ingancinci malunga nokusetyenziswa kwezinye iindlela ezingafuneki ngokukhethekileyo xa zisetyenziswa.
Ngama-arrhythmias ngenani leentliziyo elinyukayo, unokuzimela ngokuzenzekelayo i-valerian kunye ne-motherwort, i-corvalol, i-valocordin, kunye ne-arrhythmias kunye neentlobo ezingabonakaliyo ze-Zelenin eziqulethe i-belladonna.
Amathuba oogqirha ayenyuka kunye nokuqaliswa kokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zonyango lwe-electropulse. Okokuqala, okokuqala, ukugqithiswa kombane kwintliziyo (EMF) kunye nefayibrillation ye-atrial. Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo ngale ndlela kwimeko enzima kakhulu - kunye nefibrillation ye-ventricular - uye wavumela ukuhoxisa kwiimeko zokufa kwekliniki kwaye ulondoloze ubomi bezigidi zamagulane. Oogqirha baphumelele ngempumelelo kwaye bafakela abaqhubi beentliziyo zenqwelo-moya ababeka entliziyweni imvama efunekayo yezichaso kwizigulane ezikhuselekileyo. Lo msebenzi usetyenziswa kwizixeko ezininzi ezinkulu zelizwe lethu; kwaye kubandakanywa naseSverdlovsk, kwiziko le-cardiosurgical.
Sikuqhelanise nemigaqo yokuthintela okwesibini kunye nokunyangwa kwezifo eziqhelekileyo zesimo senhliziyo. Siyathemba ukuba le nkcazelo isetyenziswe ngabafundi abanomdla wokunciphisa ikhosi yesifo, ukukhusela iingxaki ezinokwenzeka, kwaye ngale ndlela kunye noogqirha ukuphucula impilo yabo.
Kwimiba enzima njengento yokulwa nezifo zengqondo, inxaxheba yenkonzo yenkonzo yinto enhle.
Kwiminyaka yakutshanje, uphando lwezenzululwazi luye lwaphuhliswa kakhulu kwaye iingcebiso ezicetywayo zokuxilongwa ngexesha elifanelekileyo, ukukhusela okukhuselekileyo, unyango olusebenzayo lwezifo ze-cardiovascular.
Ubangela kunye nokunyangwa kwentlungu
Izixhobo zePhysiotherapeutic, unyango olubandayo
Umdla wesibi kakhulu emhlabeni
Utywala buchaphazela njani umzimba womfazi?
Arrhythmia yentliziyo, unyango lwe-arrhythmia
I-Vaginismus yindoda yesini yesifo
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo yeCacholonga
Ikhekhe ngeeshizi kunye neetamatisi
Ngaba kunokwenzeka ukuphinde uphinde ufundise i-femanizer kwi-monogamy?
Isibikezelo seenkwenkwezi ngoFebruwari 5
I-Sharp verryn kwi-cumat
I-curry ehlaza kunye nelayisi
I-Horoscope ye-Cancer-Woman ngo-Oktobha 2016
Uvavanyo lwefestile ukusuka kwivenkile ye-brand ye-brand likeCheap.ru
UJared Leto wathandana nomzekelo oneminyaka engama-20 ubudala waseRussia?
Abantu abazalwa ngonyaka wenja
Uphuhliso olusebenzayo lwe-sinusitis kunye namachiza omntu
Iipancakes ezivela kwiiregeti
I-Spaghetti kunye nebhekoni kunye neepere
Ukupheka kwezitya ezilula kunye ezihlwayekayo zokutshisa iholide kunye nayo yonke imihla
I-Pasta eneemissels kunye ne-shrimps
Izenzo zothando kunye nezipho
Incwadi ephuphayo yephupha: umbala omhlophe ubonakala ngathi?